Dal sinaan iyo cadaalad leh
Haa! ku aadan sinaan
Iswiidhan waxay isku taxalujisaa sinaanta dhinaca dhamaan dhinacyada nolosha. Si loo gaaro sinaan wuxuu hadafku yahay in qiime isku mid ah la geliyo waxa haweenka iyo ragu samaynayaan.
Baarlamaanku wuxuu go'aamiyay in bulshada Iswiidhan ay ahaato mid si dheeraad ah u siman. Tani waxay tahay in
haweenka iyo ragu qaab isku mid ah ay raad ku yeelan karaan go'aamada siyaasadeed
haweenka iyo ragu ay wax baran karaan una shaqaysan karaan lacag qaab isku mid ah taas oo siisa isku filnaansho dhaqaale noloshooda oo dhan.
haweenka iyo ragu waa inay lahaadaan fursado isku mid ah inay daryeelaan caruur iyo inay qaybsadaan mas'uuliyada shaqada bilaa lacagta ah ee loo baahanyahay in laga sameeyo guriga.
dagaalka ragga ee ka dhanka ah haweenka uu istaago
haweenka iyo raga, gabdhaha iyo wiilasha waa inay xuquuq isku mid ah u yeeshaan inay iyagu u taliyaan jirkooda gaar ahaan.
Hey'ada dawladeed ee Sinaanta - ku saabsan Iswiidhan shaqadeeda sinaanta
Maya! ku aadan takoorada
Gudaha Iswiidhan waxaa ka jirta ilaalin laga helo takoorida. Takoorid micnaheedu waa in qof loola dhaqmo si ka liidata kuwa kale.
Waa mamnuuc haddii tani ay sabab u tahay:
Dhamaan goobaha shaqada iyo iskoolada waa inay lahaadaan qorshe ka soo horjeeda takoorida. Adigu qofka ku takooray waxaad ka ashkatayn kartaa wakiilka xagga takoorka (DO).
DO - wakiilka xagga takoorka
Adigu waxaad leedahay xuquuq iyo waajibaad markaad joogto goobtaada shaqada iyo dhanka shaqo-bixiyahaaga. Su'aalaha ku saabsan waxa ku khuseeya adiga shaqaale ahaan iyo shaqo-bixiyahaaga waxaa lagu magacaabaa sharciga shaqo.